Thola imininingwane nge-Covid-19 nge-WHO Health Alert kuWhatsApp | Izindaba zamagajethi
I-WhatsApp iba yithuluzi elilodwa lokuthola ulwazi oluqondile kusuka ku-OMS nge-bot yayo entsha. Lo msebenzi we-WHO uzohlinzeka bonke abafuna ukuthola imininingwane esemthethweni ngezihloko ezahlukahlukene ezihlobene ngqo ne-coronavirus noma ubhubhane lwe-Covid-19. Futhi i-bot izoba itholakala ngazo zonke izilimi eziyisithupha we-United Nations kodwa njengamanje itholakala kuphela ngesiNgisi. Ama-Arabhu, amaShayina, amaFulentshi, amaRashiya namaSpanishi kulindeleke ukuthi angezwe emasontweni ezayo.
Kungenzeka ukuthi ngenkathi sibhala le ndatshana izilimi sezivele zitholakala ngakho-ke sonke singabheka kalula imininingwane yangempela nephikisiwe njengoba iza ngqo kusuka ku-WHOImininingwane ethembekile ukwedlula leyo kulo bhubhane ngeke siyithole.
1 Imininingwane ewusizo yokuthi ungazivikela kanjani noma uthole izindaba ezingamanga
2 Yile ndlela esebenza ngayo i-WHO Health Alert bot
Imininingwane ewusizo yokuthi ungazivikela kanjani noma uthole izindaba ezingamanga
Kunzima ukuthola izindaba ezingezona kodwa uma sinazo imininingwane eqondile evela ku-WHO singaqiniseka ukuthi lwazi lweqiniso. Imininingwane yokuthi ungazivikela kanjani ekuthelelekeni, izeluleko kulabo okumele bahambe ngoyebo noma yebo, ukuthi bangazithola kanjani "izindaba ezingamanga" mayelana ne-coronavirus kanye nolwazi ngegciwane okwamanje.
Ngokunengqondo lokhu insiza imahhala ngokuphelele futhi ivumela ngezinyathelo ezimbalwa ezilula ukusebenzisa i-bot ukuthola imininingwane esemthethweni. Ukusebenza kulula kakhulu futhi noma ngubani angakusebenzisa kusuka ku-smartphone yakhe.
Into yokuqala okufanele siyenze gcina inombolo + 41 79 893 18 92 phakathi koxhumana nabo futhi uma ususindisiwe thumela umlayezo ngegama elithi "Sawubona" ​​ukuqala ukuxhumana ne-bot. I- "bot" ingeyalabo abangawazi umshini ophendula ngokuzenzekelayo, akuyena umuntu wangempela kepha imininingwane ethunyelwa yile bot ilawulwa ngabantu ngakho-ke kulokhu i-WHO ingemuva kwayo, imininingwane ingokoqobo ngokuphelele.
Yile ndlela esebenza ngayo i-WHO Health Alert bot
Njengamanje uma sibhala lo mbhalo kusebenza negama "Sawubona" kodwa kungenzeka ukuthi njengamanje selivele litholakala ngegama elithi "Sawubona". Singakwazi bhala inombolo yokukhetha noma nge-emoji futhi sithola izimpendulo ezilandelayo kulezi zenzo:
Thola izibalo kubantu abatheleleke futhi abashonile yi-coronavirus
Yonke imininingwane yokuthi ungakugwema kanjani ukutheleleka kwale Covid-19, ngamathiphu okugeza izandla noma ukugwema izindawo ezinabantu abaningi
Izimpendulo zemibuzo ejwayelekile ngokufaka kabusha enye inombolo ukuthola impendulo
Amanye amanga mayelana ne-coronavirus, izinganekwane zasemadolobheni njll okwabelwana ngazo kumanethiwekhi
Izindaba ezihlobene ne-Covid-19
Indlela elula yokwabelana ngale bot noxhumana nabo
Iwebhusayithi ye-WhatsApp iphinde inikeze imininingwane nge-WHO eqondile ne-Health Alert. I- Isikhungo Solwazi se-WhatsApp Coronavirus Kukhona nezindaba eziqhubekayo ngokuvela kwalolu bhubhane futhi kungenye yezindlela eziphephe kakhulu zokwazi imininingwane yakamuva yezempilo esemthethweni ngokusobala ukuvumela ukwabelana lolu lwazi.
Umqondisi we-WHO, I-Tedros Adhanom Ghebreyesus, ichaza ukuthi amanethiwekhi nobuchwepheshe obusezandleni ezinhle kuyithuluzi elibaluleke kakhulu, kodwa futhi kubalulekile ukuthola imininingwane ethembekile futhi ungakholelwa kubo bonke labo esibabona beshicilelwe:
Ubuchwepheshe beDijithali businikeza ithuba eliyingqayizivele nelingakaze libonwe lokuthi lonke ulwazi olubalulekile lwezempilo lwabiwe ngokushesha nangempumelelo, ngaleyo ndlela luvimbele lolu bhubhane ukuthi lusabalale ngokushesha okukhulu, lusize ukusindisa izimpilo futhi luvikele ababuthaka kakhulu ngolwazi lwangempela futhi bangabelani ngakho konke okufundayo kumanethiwekhi noma kwabezindaba.
Singasho ukuthi sisesikhathini esinzima kepha ngokubambisana kufanele senze okungcono kakhulu kulesi simo, siyaqonda ukuthi kunzima kubantu abaningi ukuhlala emakhaya njengamanje nokuthi izinkampani ezincane zinezinkinga eziningi okwamanje isinyathelo manje futhi ngokushesha. Kuhle ukuthi izindaba nayo yonke imininingwane kwabelwane ngayo ngokushesha ngokusebenzisa amanethiwekhi omphakathi nabanye, kodwa kufanele uqaphele ngalokho owabelana ngakho njengamanje nokuningi esimeni esizithola sikuso kusukela ukuphepha ngisho nezimpilo zabantu zincike kuso ezimweni eziningi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izaziso » Thola ulwazi ku-Covid-19 ne-WHO Health Alert ku-WhatsApp
UXiaomi wethula ikepisi ukuqinisa izinwele